ट्याटु बनाउनु अघि यी कुरामा ध्यान दिऔँ :: डा रीति आचार्य :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
ट्याटु बनाउनु अघि यी कुरामा ध्यान दिऔँ
डा रीति आचार्य शनिबार, असार १९, २०७८, १७:३९:१८
ट्याटु बनाउने प्रचलन अहिले निकै बढेको छ। विशेष गरी युवाहरु यसप्रति बढी आकर्षित देखिन्छन्। ट्याटु भनेको सुई र मसीको माध्यमले छालामा बनाइने विभिन्न बुट्टाहरु हुन्।
ट्याटु बनाउँदा मसी छालाको भागमा पुग्ने हुँदा यो शरीको अंग झैँ सधै आफूसँग रहन्छ। अहिले विश्वव्यापी रुपमा युवापिढीमा बडी आर्टको विशेष उत्साह देखिन्छ। बडी आर्ट मध्ये ट्याटु, स्थायी मेकअप (कस्मेटिक ट्याटु) र शरीर छेड्ने बढी प्रचलनमा छन्।
गत २० वर्ष यता स्वदेश तथा विदेशमा स्थायी ट्याटुको लोकप्रियता बढ्दो छ। विश्वका कतिपय विकसित मुलुकमा १५ देखि ५० प्रतिशत सम्म मानिसको शरीरमा कम्तीमा एउटा ट्याटु रहेको पाइएको छ र यो क्रम वर्षेनी बढीरहेको छ। अझ युरोप तथा अमेरिकामा ट्याटुको यस्तो लहर चलेको छ की हाल इटाली र स्वीडेनका लगभग ५० प्रतिशत र उत्तरी अमेरिकामा ४५ प्रतिशत जनसंख्याले आफ्नो शरीरमा ट्याटु बनाइसकेका छन्।
साधारणतया ट्याटु पुरुषहरुले बढी बनाउने गरेतापनि हाल महिलाहरुले पनि शरीरका विभिन्न अंगहरुमा ट्याटु बनाउन थालेका छन्। १६ देखि ३९ वर्षका मानिसहरुमा ट्याटु बनाउने ठुलो होडबाजी नै देखिन्छ। ट्याटु बनाउनुका पछाडी सबैको आ–आफ्नै कारण र उद्देश्य हुन्छन्।
दक्षिणपूर्वी एसियामा ट्याटुको आफ्नै महत्व छ। नेपाल, भारत, थाइल्याण्ड, कम्बोडिया, भियतनाम, इण्डनोनेसिया जस्ता मुलुकमा ट्यायुले हजारौ वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको देखिन्छ। यहाँ ट्याटु शरीरमा एक बुट्टा बनाउने नभई एउटा, धर्म, सभ्यता, संस्कृति, आध्यात्मकसँग जोड्ने माध्यमको रुपमा पनि लिइन्छ। नेवारी समुदायमा ट्याटुले कुदृष्टि हटाउने र जीवन स्वस्थ हुने र थारु समुदायमा यो विवाहित महिलामा गहनाको रुपमा लिइन्छ।
कुनै पनि ट्याटु बनाउँदा यसमा रंगिन मसी र विभिन्न साइजका सुई, ट्याटु मसिनको प्रयोग हुन्छ। ट्याटु बनाउँदा शरीरमा चोट लाग्ने र यसको मसी लामो समयसम्म रहने हुँदा ट्याटु बनाउनु अघि विभिन्न कुराको जानकारी अति आवश्यक छ। जसलाई यहाँ तल उल्लेख गरिएको छः
१. ट्याटु बनाउँदा तालिम प्राप्त व्यावसायिक व्यक्तिबाट बनाउनु राम्रो हुन्छ। सरसफाईको मापदण्ड अनुसार बनाउँदा छालामा संक्रमित हुने सम्भावना कम हुन्छ। जथाभावी सुईको प्रयोग गर्दा ट्याटु बनाएको भागमा संक्रमण हुन सक्छ। जसले ट्याटु बनाएको भागमा सुन्निने, पिप जम्मा हुने जस्ता समस्या आउने गर्छ। ट्याटु बनाउने सुई सफा नभए कतिपय ट्याटु बनाएको ठाउँमा मुसा पनि सर्न सक्छ। यस बाहेक रगतबाट सर्ने भाइरसजन्य संक्रमण जस्तैः एचआइभी र हेपाटाइटिसको सम्भावना पनि हुन्छ।
२. ट्याटु बनाउँदा प्रयोग गरिने मसीहरु प्राय अर्गानिक त कतिपय रसायनिक र हेभी मेटलबाट तयार पारिन्छ। यी मसी लामो समय छाला भित्र रहने हुँदा यसले छालामा एलर्जी गर्छ या गर्दैन भन्ने कुराको पहिले नै अनुमान गर्न सकिदैन। ट्याटुमा बढी मात्रामा कालो रंगको प्रयोग भएतापनि प्रयोग गरिएका रातो रंगको मसीले कतिपयमा एलर्जी भएको पाइएको छ। ट्यायुमा प्रयोग गरिने मसीले कसैलाई महिना दिन त कसैलाई वर्षौपछि एलर्जीको समस्या देखिन सक्छ। जसमा ट्याटु बनाएको ठाउँमा चिलाउने, सुन्निने र ट्याटुको छाला बाक्लो हुन थाल्ने समस्या देखिन्छ।
३. कतिपय मानिसको शरीरमा चोट लाग्दा निको भएका छाला उठेर आउने हुन्छ, जसलाई केलाइड भनिन्छ। ट्याटु बनाउँदा पनि छालामा चोटको कारण केलाइड पलाउन सक्छ। तसर्थ यस्तो संभावना हुने मानिसले ट्याटु नबाउँदा नै उपयुक्त हुन्छ।
एकपटक बनाएको ट्याटु जीवनभर रहने हुँदा यो आवेगमा या कसैको लहलहैमा लागेर बनाउनु हुँदैन। धेरैजसो कलिलै उमेरमा बनाएको ट्याटु पछि गएर त्यो आफूलाई मन नपर्न पनि सक्छ। विशेषगरी कसैको नाम लेखेर बनाइने ट्याटु पछि गएर धेरैले हटाउने गरेको समेत पाइएको छ। शरीरको देखिने कुनै अंगमा बनाइएको ट्याटु पछि आर्मी, प्रहरी वा वैदेशिक रोजगारीको शिलशिलाका क्रममा हटाउन पर्ने पनि हुन सक्छ। ट्याटु हटाउन लेजरको आवश्यकता पर्छ, जुन खर्चिला र लामो समय पनि लाग्छ।
तसर्थ कुनै पनि ट्याटु बनाउँदा आफूलाई र आफ्नो कामलाई सुहाउँदो किसिमको सोचेर र व्यावसायिक ट्याटु आर्टिस्टसँग सल्लाह गरेर नै बनाउनुपर्छ। सुरक्षित र सही तरिकाले गरिएको ट्याटुको असर पनि कम हुन्छ। यसो गर्नाले ट्याटुबाट हुन सक्ने नकारात्मक असर र ट्याटु हटाउने झन्झटबाट बच्न सकिन्छ।
(डा रिती आचार्य झापाको दमकस्थित डेल्फी स्कीन केयर अस्पतालकी छाला रोग विशेषज्ञ हुन्।)